Global Voices teny Malagasy » Miatrika famonjana noho ny tatitra momba ny fanorisorenana ara-nofo ilay mpampianatra Indoneziana · Global Voices teny Malagasy » Print
Miatrika famonjana noho ny tatitra momba ny fanorisorenana ara-nofo ilay mpampianatra Indoneziana
Voadika ny 03 Desambra 2018 7:08 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Sariitatra an-tserasera navoakan'i Gump n Hell mamerina mitantara ny nanjo an'i Nuril. Nahazoana alalana. Fanazavana nadika etsy ambany.
Vehivavy iray no nohelohin'ny Fitsarana Avo tao Indonezia higadra an-tranomaizina mandritra ny enim-bolana  tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra noho ny fandraketany ny antso an-telefaona mivantana nisy ny fanorisorenana ara-nofo izay avy amin'ny lehibeny, izay nandrahona ara-nofo azy tao am-piasana.
Nanery ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana hampiato vonjimaika ny famonjana azy ny htezeram-bahoaka tamin'ilay didim-pitsarana .
Baiq Nuril Maknun, renim-pianakaviana 37 taona manan-janaka telo ary mpampianatra ao Mataram any amin'ny faritanin'i Nusa Tenggara Andrefana (NTB), dia notorian'ny talen'ny sekoly ho nanao fanalam-baraka tamin'ny taona 2017 taorian'ny nandraketany ny resaka an-telefaona izay nireharehan'ity farany momba ny fiarahany tamin'ny mpampianatra iray hafa tao amin'ny sekoly. Niparitaka tao amin'ny vondrona famelan-kafatra WhatsApp ilay fandraketam-peo rehefa avy nizara izany niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy iray hafa izy. Tsy miresaka momba ny maha-ara-dalàna ny fandraketana ny antso an-tariby raha tsy misy ny fifaneken'ny roa tonta mialoha ny lalàna Indoneziana .
Nilaza i Nuril fa ny tale, izay antsoina hoe Muslim (mahazatra ao Indonezia ho an'ny olona iray fantatra amin'ny anarana tokana), dia nandrahona sy nikaoty azy, matetika mirehareha  momba ny fiarahany ara-nofo amin'ny mpampianatra hafa ao an-tsekoly. Matetika hoy izy dia nanasa azy hihaona aminy tany amin'ny trano fandraisam-bahiny izy mba hifanaovany fotaona aminy. Tsy nitory momba ilay fanorisorenana izy, noho ny tahotra ho very asa.
Saingy nanomboka nahare tsaho izy avy eo fa izy tenany mihitsy no miaraka ivelan'ny fanambadiana amin'ny lehibeny. Nanapa-kevitra ny hanao fandraketana ny resany an-telefaonina amin'ny lehibeny izy, mba hanangonana porofo amin'ny zava-nitranga, raha toa izy ka mila manambara ny tsy faha-melohany. Saingy navoakan'ny iray tamin'ireo mpiara-miasa tamin'i Nuril tao amin'ny WhatsApp ity fandraisam-peo ity ary tonga tany amin'ny mpikambana maro tao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny sekoly. Voatery nametra-pialana i Muslim, saingy noraisin'ny  sampan-draharahan'ny tanora sy ny fanatanjahan-tena taty aoriana.
Sariitatra an-tserasera avy amin'ny Gump n Hell  mamerina mitantara ny nanjo an'i Nuril. Nahazoana alalana.
Comic translation, by panel, starting at top left. 1. Baiq Nuril, a former administrative teacher of SMAN 7 state high school, mother of three, a sexual harassment victim. 2. The man has verbally harassed her since mid-2012. Tired of being accused of having extramarital affairs with the man, she recorded one of his calls, but didn't report it out of fear of losing her job. 3. Her colleague posted the recording on a WhatsApp group. Out of shame, her boss pressed charges against her using UU ITE. 4. Mataram District Court dismissed her from all charges, but Supreme Court punished her, while her harasser got a promotion within the City of Mataram. 5. The children discuss how other sexual violence victims are being sidelined by the justice system.
Fandikan-tenin'ny sariitatra, amin'ny tontonana, manomboka eo ambony ankavia . 1. Baiq Nuril, mpampianatra tompon'andraikitry ny sekolim-panjakana ambony SMAN 7 teo aloha, renim-pianakaviana manan-janaka telo, izay niharan'ny fanorisorenana ara-nofo. 2. Nolazainy fa nandrahona azy ara-nofo hatramin'ny tapaky ny taona 2012 ity lehilahy ity. Leon'ny fiampangana ho niaraka ivelan'ny fanambadiana tamin'ity lehilahy ity izy, ka noraketiny ny iray tamin'ireo resaka an-telefaonina nifanaovany, saingy tsy nilaza izany noho ny fahatahorany ho very asa izy. 3. Nandefa ny fandraisam-peo tao amin'ny vondrona WhatsApp ny mpiara-miasa aminy iray. Noho ny henatra, nitory azy tamin'ny fampiasana UU ITE ny lehibeny. 4. Nanafaka azy tamin'ny fiampangana rehetra ny Fitsaram-paritra tao Mataram, fa ny Fitsarana Tampony kosa nanasazy azy, raha nahazo toerana tao amin'ny tanàndehiben'i Mataram kosa ilay nanao fandrahonana azy. 5. Ny ankizy mifanakalo hevitra momba ny hoe nahoana ny rafi-pitsarana no manilikilika ireo niharam-boina tamin'ny herisetra ara-nofo .
Ho valifaty, nitory an'i Nuril ho nanala baraka i Muslim. Nanafaka an'i Nuril madiodio ny Fitsaram-paritra tao Mataram ary nanambara azy ho niharan'ny fanorisorenana ara-nofo. Saingy nampiakarin'ny mpitory tao amin'ny Fitsarana Tampony Indoneziana ilay didim-pitsarana izay nahatsikaritra fa nandika ny lalàna mifehy ny Vaovao sy ny Fifandraisana elektronika (UU ITE) i Nuril, izay eo ambanin'ny lalàna heloka bevava ao Indonezia.
Nahatsikaritra ny fitsarana fa meloka i Nuril tamin'ny andininy faha-27 ao amin'ny lalàna ITE. Ny voalohany dia manameloka ny “niniana natao ary tsy nahazoana alàlana ny famoronana/fizarana/famoahana votoaty pôrnôgrafika amin'ny aterineto”, raha ny faharoa kosa dia ny milaza ny “niniana natao ary tsy nahazoana alàlana ny famoronana/fizarana/famoahana votoaty amin'ny aterineto ny votoaty an-tserasera izay misy faniratsirana/fanalam-baraka.”
Ankoatra ny sazy an-tranomaizina enim-bolana, dia nodidiana handoa onitra 500 lavitrisa Rupiah (efa ho 34.000 dolara) i Nuril. Mandray karama 125 dolara isam-bolana ny mpampianatra any amin'ny sekolim-panjakana ao amin'ny faritanin'ny NTB.
Ny fanentanana #VonjeoIbuNuril
Vondrona maro samihafa no nanampy ny fanombohana ny fanentanana #VonjeoIbuNuril izay mikendry hiarovana ny fahafahan'i Nuril. Miantso ny olona iray hoe “Ibu” ny Indoneziana ho mariky ny fanajana sy ny firaiketam-po ho an'ny mpampianatra vehivavy, na ny renibe efa zokiolona iray.
Nosoniavin'ny olona maherin'ny 162.000 ny fanangonan-tsonia an-tserasera  nangataka ny filoha Joko Widodo (Jokowi) hanome ny famotsoran-keloka ho an'i Nuril .
Na dia teo aza ny fanohanana goavana avy amin'ny vahoaka ho an'i Nuril, nilaza i Jokowi fa tsy hitsabaka  amin'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony izy. Nanoro hevitra an'i Nuril izy hikaroka fanihadiana momba ny raharaha na mangataka ny grasi (famindram-pon'ny filoham-pirenena) rehefa hanan-kery ny saziny.
The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) criticized  the president's statement and questioned his commitment to protect women and other victims of sexual harassment in the country.
Nitsikera  ny fanambaran'ny filoha ny Ivontoeran'ny Fanavaozana ny Fitsarana Heloka Bevava (ICJR) ary nanontany ny andraikiny amin'ny fiarovana ny vehivavy sy ireo niharam-boina hafa tamin'ny fanorisorenana ara-nofo ao amin'ny firenena.
Nisy ihany koa ny fanentanana avy amin'ny fanangonam-bola izay natomboka  mba handoavana ny onitr'i Nuril. Hatramin'ny fotoana nanoratana dia efa nahangona vola mitentina 22.500 dolara ny fanentanana.
Mitaky ny fanafoanana ny lalànan'ny fanalam-baraka ny mpisolovava
Nanasongadina ny raharahan'i Nuril fa ilaina ny mamerina mijery ny andininy faha-27 amin'ny lalàna UU ITE. Araka ny Tambajotran'ny Fahalalaham-pitenenana any Azia Atsimo Atsinanana (SAFENet), ity fehezan-dalana dia matetika ampiasain'ireo ao amin'ny governemanta hampangina ny mpitsikera azy ireo. Nanara-maso ny tranga miisa 245 mifandraika amin'ny lalàna UU ITE ny SAFENet , izay nahitana ny fanalam-baraka ny 174 tamin'ireo.
Raha namaly ny fanangonan-tsonia ho fanavaozana ny lalàna UU ITE, nanamafy  ny Minisitry ny Serasera sy ny Fampahalalam-baovao Indoneziana (Menkominfo) Rudiantara, raha sady miombom-kevitra tamin'ny zava-nitranga tamin'i Nuril ihany izy, fa tsy ilaina ny fanavaozana ny lalàna. Nampiany fa tokony hisambotra ny tena meloka izay nanaparitaka ny fandraketana nataon'i Nuril ny polisy. Nampiahiahy ny vondrona mpiaro ny zo nomerika ny valinteny nomeny, izay matahotra fa tsy hisy fanitsiana ny lalàna manjavozavo ary mbola ho maro ireo niharam-boina no mety hiatrika ny anjara tahaka izany tahaka an'i Nuril amin'ny hoavy.
Rehefa niresaka tamin'ny solontenan'ny Fikambanan'ireo Niharan'ny UU ITE ( PakuITE ) aho, dia nanazava ny antony mahatonga ny lalàna ho famoretana izy ireo:
Tsy mahomby ny fampiharana ny UU ITE , misokatra amin'ny fandikana maro ireo andininy ao amin'ny lalàna. Tsy ilaina izy ireo ary ampiasaina amin'ny fomba hikendrena ireo mpitsikera sy ireo izay mampiaka-peo manohitra ny politikan'ny governemanta, ireo izay mitady ny rariny. Mangataka ny soso-kevitra avy amin'ny vahoaka momba ny asa vitany ny governemanta. Nefa ahoana no ahafahantsika manao izany raha mety hosaziana noho ny fanavaozam-baovao an-tserasera isika? Mampiseho ny angondrakitra antsika fa ny 90% -n'ireo fotoana nampiasana ny lalàna dia hiatrehana ny fitoriana, ny fandrahonana, ary ny fampiasana valifaty ary ny fampanginana ny tsirairay.
Raha nilefitra tamin'ny faneren'ny vahoaka, nanapa-kevitra ny hanemorana ny sazin'i Nuril  ny 19 Novambra 2018 ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana .
Mandritra izany fotoana izany, tsy nisy fepetra ara-dalàna noraisina momba an'i Muslim, na dia teo aza ny didim-pitsarana navoakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny porofo fa nandrahona ara-nofo ireo mpampianatra maro izay anisan'ny ekipa mpiara-miasa taminy teo aloha izy. Nivoady tsy handray fepetra  momba azy i Mataram, ilay tanàndehibe izay hiasany ho lehiben'ny Sampan'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/03/131217/
 higadra an-tranomaizina mandritra ny enim-bolana: http://www.thejakartapost.com/news/2018/11/14/jailed-for-reporting-her-sexual-offender-mataram-woman-cries-for-help.html
 Gump n Hell: https://www.facebook.com/GumpnHell/
 fanangonan-tsonia an-tserasera: https://www.change.org/p/jokowi-beri-amnesti-untuk-bu-nuril-amnestiuntuknuril/sign?utm_medium=email&utm_source=aa_sign&utm_campaign=455941&utm_content=&sfmc_tk=1HapyyssBrfriDvG2c9c3Snq7DUdgxzh7tminhXFvrbMO%2bgHURxrprO5FMx3x8AI&j=455941&sfmc_sub=267052245&l=32_HTML&u=65840448&mid=7259821&jb=499
 hanemorana ny sazin'i Nuril: https://nasional.kompas.com/read/2018/11/19/22420301/kejagung-tunda-eksekusi-penahanan-baiq-nuril
 Nivoady tsy handray fepetra: http://lombokpost.net/2018/11/22/muslim-masih-duduk-manis/